प्रहरी भ्यानमै रोमान्स, यस्तो छ चर्चित ५ यौन काण्ड ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
प्रहरी भ्यानमै रोमान्स, यस्तो छ चर्चित ५ यौन काण्ड !
यौन मानव जीवनको निकै महत्वपूर्ण र आवश्यक प्राकृतिक उपहार हो । यौनले आत्म सन्तुष्टि मात्र होइन मानव जीवनको अस्तित्व नै राख्दै आएको छ ।
पश्चिमा देशहरुमा त यौन खुल्ला भइसकेको छ तर, परम्परागत देशहरुमा यसलाई अझै धामिृक आस्था, परम्परागत मान्यतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यसै क्रममा आज हामी विश्वमा निकै चर्चित बनेका केही यौना काण्डहरु यहाहरु समक्ष राख्दै छौँ ।
१. चर्चमा प्राथना भइरहँदा आवाज आएपछि
इटालीको एक चर्चमा सबै प्राथनामा व्यस्त थिए । तर, त्यसै क्रमाम चर्चकै एक कुनाबाट यस्तो आवाज आयो जसले सवैलाई झस्कायो ।
समागमनमा व्यस्त रहेको जोडिका कारण प्राथना विथोलिएपछि प्रहरी बोलाएर उनीहरुलाई पकडियो । पछि थाहा भयो कि उनीहरु रक्सीले मातेका थिए र आफूलाई काबुमा राख्न सकेनन् ।
२. प्रहरी भ्यानमै रोमान्स
नेदरल्याण्डमा प्रहरी आफ्नो भ्यान रोकेर बाटोको छेउमा बसिरहेका थिए । त्यसैबेला एक जोडि प्रहरी भ्यान नजिकै आयो र भ्यानको बोनटमा बसेर रोमान्स गर्न थाल्यो । रोमान्स गर्दै गर्दा प्रहरीले उनीहरुलाई देख्यो तर पक्रन भने सकेन । कारण थियो नेदरल्याण्डको यौन नीति । त्यहाँ यदी यौन कार्य गर्दै गर्दा प्रहरीले भेटेपनि कारवाही गर्न नपाउने कानुन छ ।
३. न्याधिसले अदालतमा नै कृत्रिम यौनीको प्रयोग गरेपछि
सन् २००६ को कुरा हो । अमेरिककाको एक अदालतमा मुद्धामा सुनुवाइ भइरहेको थियो । न्यायाधिस आफ्नै टेवल पछाडि बसेर कृत्रिम यौनीको प्रयोग गरी मैथुन गरिरहेको अवस्थामा भेटए । घटना सार्वजनिक भएपछि उनले आफ्जो जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो ।
४. बैंकभित्र फ्रन्च जोडि सम्हालिन नसकेपछि
एक फ्रेन्च जोडि बैंकभित्र रोमान्स गरिरहेको थियो । बैंकको एकान्त कुनामा कोही नभएको मौकाछोपी त्यो जोडि यौन प्यास मेट्न लालाहित भयो । सोही क्रममा बाटोमा हिँडिरहेका एक व्यक्तिले त्यो दृश्य देखे र आफ्नो मोबाइलमा कैद गरे । उनले मोबाइलमा दृश्य कैदा गरिरहँदा महिलाको आँखा त्यहाँ पर्यो र उनी बेहोस् नै भइन् ।
५. एटिएममा पैसा निकाल्ने कि सेक्स गर्ने
स्पेनको एक सहरको एटिएम बुथबाट प्हरीले एक जोडिलाई रंगेहात समात्यो । उनीहरु बुथभित्र यौन सम्पर्क गरिरहेका थिए । शरीरको सम्पूर्ण कपडा फुकालेर यौनक्रियामा लिप्त भएको सो जोडिलाई सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल लगायतका केही सांस्कृतिक र परम्परागत महत्व राखेका देशहरुमा पनि सार्वजनिक स्थल यस्ता कार्य भएको पाइएको छ । जंगल, सार्वजनिक स्थानमा यौन प्यास मेट्न लागेका बेला उनीहरुको तस्बिर र भिडियो फुटेज बाहिर आएको घटनासमेत छ । जसका कारण महिलाको समाजमा आत्मसम्मान गुमेको, वेइज्जत भएको घटना हामी सुन्नमा पाएका छौँ ।
त्यसैले कुनै पनि यौन कार्य गर्नुअघि कहाँ र कसरी गर्ने, आफू सुरक्षित छु या छैन, त्यसले भोलकिा दिनमा कस्तो असर पार्छ त्यो सोच्नु नितान्त आवश्यक छ । अझ हाम्रो जस्तो देशमा त झनै यसलाई निकै संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । एजेन्सी